Soomaali / Barnaamijka U Diyaarinta Kuleejka iyo Shaqooyinka
Advanced Placement (AP) and Pre-AP Courses
Barnaamijka fasallada AP waa koorsooyin ah heer kuleej oo imtixaan wata kuwaas oo u oggolaanaya ardaydu inay helaan koorso kuleej iyagoo wali dhigta dugsiga sare. Kuleejyada ka qeyb galaya barnaamijka ayaa koorso siin kara ardayda ku baasta imtixaanka oo keenta afar dhibic ama ka badan. Koorsooyinka AP waxay iminka ka baxaan Central Senior High, Como Park Senior High , Creative Arts Secondary, Humboldt High School, Johnson Senior High, Open World Learning Community, iyo Washington Technology. Wixii macluumaad ah ee dheeraad ah, kala xiriir 651-744-3943 ama booqo spps.org/tdas.
AVID waa barnaamij khiyaari ah kana baxa iskuulada kaasoo ardayda u dhexeysa fasallada 7-12 u diyaariya siday guul uga gaarin lahaayeen galitaanka jaamacadaha iyo xirfadaha shaqada mustaqbalka. Barnaamijka AVID wuxuu gun-dhiggiisu yahay waxbarashada dhinaca qoraalka, akhriska iyo wada shaqaynta kooxaha. Ardayu waxay fursad u heliyaan inay si wada jirah wax u akhristaan, booqoshooyinna ku sameeyaan kolleejyada iyo xirfadaha shaqooyinka. Ardayda ka qayb qaadata barnaamijka AVID, waxay mujiyaan inay iskuullada soo xaadiraan, iska diwaan galiyaan fasallo ka sarreeya kuwan dugsiga sare, iyo waliba in heerka qalin jabintoodu sarreeyo.
Ardayda waa laga aqbalaa barnaamijka AVID kadib markay buuxsadaan codsi wareysina (interview) laga qaado. Akhbaar dheeraad ah, la xiriir dugsiyada hoos ku qoran si aad ula hadasho agaasimaha barnaamika AVID ee dugsiga.
Waxbarashada iyo Xirfadaha Farsamada Gacanta
Fasalada barnaamijkan (CTE) waxay ardayda ka caawinayaan in ay helaan khibrad dhab ah iyaga oo waliba baranaya xirfado muhiim ah. Ardaydu waxay helayaan fursado ay wax kaga bartaan dad takhasus leh, in ay bilaabaan tababarka shaqada (internship), helida kiridhidyada kuleejka iyo waliba in ay ku guulaystaan shahaado la xiriirta xirfad ay jecalyihiin. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-744-1312 ama booqo spps.org/cte.
Tubta Shaqada oo loo marayoTacliinta
Barnaamijkan wuxuu ardayda siinayaa awood iyo fursad ay ku dhigtaan kuleejka Saint Paul kiridhidna ay kaga helaan. Ardaydu waxay qaadan karaan maadooyin ku saabsan ganacsiga, shahaado yar oo ku saabsan kalkaalimada caafimaadka, cilmiga kombiyuutarka, dhismaha iyo injineeriyada. Barnaamijka wuxuu u furanyahay ardayda fasallada 10-12. Si aad u hesho akhbaar dheeraad ah, wac 651-744-5252 ama booqo spps.org/cte.
Adeegyada Horumarinta Fahmada iyo Dar-dargalinta
Dhammaan iskuullada degmadu waxay bixiyaan barnaamiyo la dar-dar galiyey iyo taageero kale duwan.
Ardayda dugsiga hoose, SPPS waxay isticmaali qaaciidooyin dhowr ah (kuwaas oo ay ku jiraan awooda fahamka maskaxda imtixaanka/CogAt 7 ee ardayda fasallada kindergarden iyo labaad) si loo ogaado in ardaygu u qalmo adeega barnaamijka dar-dar galinta, kuwaas oo ay ka midyihiin barnaamijyo aad u sareeya iyo galida Capitol Hill Gifted and Talented Magnet. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-744-3943 ama booqo spps.org/tdas.
Barnaamijka International Baccalaureate
Barnaamjka International Baccalaureate (IB) wuxuu ardayda ku dhiiri galinayaa ka qayb-galka halbeeg waxbarasho oo sare oo si caalami ah loo aqoonsaday. Shahaadada barnaamijkan waxaa laga bixiyaa Dugsiyada Sare ee Central, Harding iyo Highland Park. Maadooyinka barnaamijka waxay ardayda ka caawinayaan in ay helaan kiridhidyada (credits) kuleejka haddii ay helaan dhibco afara ama kabadan imtixaanka maadada ugu dambaysa. Ardaydaa u tartamaya in ay helaan shahaado dhamaystiran waxay heli karaan ilaa sanad buuxa oo kiridhidka (credit) kuleejka ah, taas oo ku dhisan natijada imtixaankooda.
Barnaamijka IB ee sanadaha Dugsiga Hoose (PYP/Dugsiga Hoose): Dugsiyada hoose ee Benjamin E. Mays IB World iyo Highland Park, Machadka Diyaargaraynt ee Hazel Park Preparatory Academy iyo Dugsiga hoose ee Highland Park.
Barnaamijka IB Dugsiga Dhexe (MYP/Dugsiga Dhexe): Dugsiyada dhexe ee Highland Park, Dugsiga dhexe Ramsey, Dugsiga sare ee Highlandpark iyo Dugsiga sare ee Central Senior High.
Barnaamijka IB ee Dugsiga Sare (DP/Dugsiga Sare): Dugsiyada sare ee Central Senior High, Harding iyo Highland Park Senior High.
Akbaar dheeraad ah, wac 651-744-3943 ama booqo spps.org/tdas.
Fursada Tacliinta ee Kadambaysa Dugsiga Sare
Baraamijkan wuxuu ardayda siinayaa fursad ay ku bilaabaan waxbarashada kuleejka iyaga oo wali ku jira dugsigii sare. Ardayda u qalanta ee fasalada 10-12 way codsan karaan si ay maadooyin uga qaataan kuleejyada ama jaamacadaha ku yaala Aagooda. Ardaydu maadooyin ayay ka qaadanyaan kuleejka si ay u helaan kiridhidyada dugsiga sare iyo kuleejkaba iyagoon wax lacaga ah bixinayn. Sidoo kale kiridhidyadan (credits) ardaygu wuxuu u gudbisan karaa kuleejka ama jaamacada uu doorto hadhow markuu dugsiga sare dhameeyo.
Dugsiga Sare ee Saint paul ee Barashada Samaynta Gawaadhida
Dugsiga Sare ee Saint paul ee barashada samaynta gawaadhida wuxuu u fidinayaa taba bar ardayda jecel inay wax ka bartaan tignoolijiyada gawaadhida ee casriga ah. Ardaydu waxay heliyaan fursado dhab ah oo u diyaariya inay helaan shahaadada ASE oo ah (Automotive Service Excellence), barnaamijyo barashada tignoolijayadan ah oo heer koleej ah oo munaasab ku ah goobaha shaqo ee xiligan.
Barnaamijkan wuxuu u furanyahay ardayda fasllada 10-12. Gaadiidka dadweynaha ayaa ka shaqeeya aaggagaan. Wixii faah faahin ah, kala hadal lataliyaha iskuulka sare ama booqo spps.org/autocenter ama wac 651-744-7668.
Barnaamijyada La dar-dar galiyey
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay ardayda siinayaan fursad ay ku tijaabiyaan naftooda si ay u koraan awoodooda, fahamkooda iyo kartidooda waxbarasho.
Ka qaado Koorsada Kuleejka Iskuulkaaga
Ardaydu waxay qaadan karaan koorsada kuleejka iyagoo hal mar ah iskawada diwaan galinaya koorsada ay dhigaan macallimiinta dugsiga sare. Macallimiinta dugsiga sare ee fasaxa ka haysta kuleejooyinka ama jaamacadahu way bari karaan koorsada. Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay bixiyaan koorsooyin kuleejka ee University of Minnesota iyo Saint Paul College.
Barnaamijka College in Schools (CIS) ee University of Minnesota hadda wuxuu ka baxaa dugsiyada sare ee AGAPE High School, Central Senior, Como Park Senior, Harding Senior, Highland Park Senior, Humboldt High School, Johnson Senior High, Open World Learning Community iyo Washington Technology.
Koorsooyinka Saint Paul College waxay hadda ka baxaan dugsiyada AGAPE High School, Gateway to College, Harding Senior, Humboldt High School, Johnson Senior and Washington Technology. Mararka qaarkood, koorsooyinka kuleejka waa laga bixiyaa iskuullada iyadoo iskaashi lala sameynayo kuleejyo ama jaamacado kale.